(01.8.2019 မှ 07.8.2019 အထိ)တစ်ပတ်စာ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း
01.8.2019 မှ 07.8.2019 အထိ တစ်ပတ်စာ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း (1) တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအထက်လူကြီးအပြောင်းအလဲလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ပုံစံအသစ်တွေနဲ့လုပ်ကိုင်ရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်တာဝန်တွေကလဲပိုလာနိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလဲ မမေ့သေ့ဘူး။ ခေါင်းမကြည်တာမျိုး၊ဇက်ကြောတတ်တာမျိုးဆို သွေးပေါင်လေးချိန်ကြည့်ပါ။ သွေးတိုးလွယ်တဲ့နေ့ရက်တွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ အိမ်ကိစ္စ၊အမွေကိစ္စတွေရှိနေရင် ဒီကာလမှာပိုရှုပ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဖခင်နဲ့ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်သစ်ရှာရခက်ခဲနေလိမ့်မယ်။ အလုပ် စာမေးပွဲမှာ အောင်မြင်ဖို့ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကို ချိန်ဆပြီးမှလုပ်စေချင်ပါတယ်။ အဆင်မပြေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက်အကူအညီတွေပေးနေရတတ်ပါတယ်။ မထင်မှတ်ဘဲ …
ကြာသပတေးနေ့မှာ မွေးတဲ့သူတွေရဲ့ မွေးရာပါအားသာချက်နဲ့ ထူးခြားချက် (၁၀) ခု ကြာသပတေးနေ့မှာမွေးတဲ့သူတွေဟာ တခြားနေ့တွေနဲ့မတူတဲ့ မွေးရာပါအားသာချက်နဲ့ ထူးခြားချက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ (၁)- ကြာသပတေးနေ့မှာမွေးတဲ့သူတွေဟာ နားလည်ပေးနိုင်စွမ်းမြင့်မားတဲ့သူတွေပါ။ ပညာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး လက်တွေ့ကျကျတွေးခေါ်တတ်တဲ့သူတွေပါ။ (၂)- ကြာသပတေးနေ့မှာမွေးတဲ့သူတွေဟာ ရောက်လေရာတိုင်းမှာ လူတွေရဲ့ အာရုံကိုဖမ်းစားထားနိုင်တဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ အသွင်အပြင်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေပါ။ (၃)- ကြာသပတေးနေ့မှာမွေးတဲ့သူတွေဟာ မွေးရာပါ ခေါင်းေ်ဆာင်စွမ်းရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေပါ။ …
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ 28.7.2019 မှ 3.8.2019 ထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း… ဆရာ မင်းသိင်္ခရဲ့ 28.7.2019 မှ 3.8.2019 ထိ တပတ်စာ အခမဲ့ ဟောစာတမ်းကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် …. ။ ဗေဒင် ဟောကိန်းများသည် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ပညာအတိုင်း တွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည် …. ။ မိမိ၏ …